FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA ANGLISY SETTER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika anglisy Setter
Mpiorina Anglisy olon-dehibe purebred — Sary nahazoana alàlana avy amin'i David Hancock
Lisitry ny English Setter Mix Dogs
Ny English Setter dia gundog tsara tarehy, lava sy mahia. Boribory lavalava ny karandohany raha jerena avy any ambony. Ny monja dia lava sy toradroa miaraka amin'ny fijanonana voafaritra. Ny orona dia manana vavorona ary be volontany na mainty ny lokony. Mihaona ny haavon'ny nify na manaikitra ny hety. Ny maso lehibe sy boribory dia mainty volontany. Averina ambany sy ambany ny sofina, mihantona na dia misy haavon'ny maso aza, rakotra volo landy. Ny maso vaventy dia marevaka. Lalina ny tratra, saingy tsy malalaka sy boribory loatra. Ny rambony dia manomboka amin'ny topline, matevina kokoa eo am-pototra ka hatrany amin'ny teboka misy volony mahitsy sy silky. Esorina ny lalàma indraindray. Ny palitao dia fisaka, landy ary milomano, misy volom-borona amin'ny rambony, ao aorian'ny tongotra, eo ambaniny, ao an-kibo, ao anaty tratra ary ny sofina. Ny loko palitao dia ahitana fotsy misy manga, voasarimakirana, volomboasary na volontsôkôlà misy marika samy hafa. Ny sombin-kazo amin'ny palitao tokana dia mety maivana amin'ny lanjany sy ny habeny. Ny alika sasany dia tricolor (manga, fotsy sy volontany).
alika kely toy pitbull amidy
Ny English Setter dia mpiasa haingana sy mangina ary manana orona tsara ary palitao izay mitazona ny alika hahazo aina amin'ny andro mafana sy mangatsiaka. Alika malemy fanahy sy tony tokoa. Sariaka sy tsara miaraka amin'ny ankizy, mandeha mora izy ireo ary tia ny fitiavana rehetra azony. Mientanentana sy be zotom-po any ivelany, fa tsy mihetsika ao anaty trano. Miaraka amin'ireo tompona mpandefitra izy ireo dia ho tonga fanahy iniana. Afaka sarotra vaky trano . Fitsipika , FIRAFITRA SY Training tokony hanomboka aloha mba hisorohana ny fampandrosoana ny fahazaran-dratsy . Mila izy ireo manam-pahefana , tony, nefa mafy orina, matoky ary tsy miova tompona, fa tsy tokony hokarakaraina mafy. Mahatsapa ny feon'ny olona iray izy ireo ary tsy hihaino raha mahatsapa izy ireo fa matanjaka kokoa noho ny tompony izy ireo, na izany aza dia tsy handray tsara ny famaizana henjana. Ny tompon-trano dia mila milamina, nefa manana rivotra voajanahary. Mila firafitra maro ary ankafizo ny milalao alika hafa. Ny Seters anglisy dia mpiambina ampy. Tian'izy ireo ny mandehandeha, mihady ary mitsambikina tsara. Misy karazany roa, tsipika an-tsaha ary tsipika fampisehoana (dabilio). Ny karazany an-tsaha dia natao ho an'ny asa fihazana sy fitsapana any an-tsaha ary amin'ny ankapobeny dia somary kely sy maivana kokoa. Ny karazana dabilio dia namboarina ho fampisehoana fampifanarahana. Ireo karazany roa ireo dia mazoto ary mila fanatanjahan-tena isan'andro, fa ny tsipika an-tsaha kosa dia manana haavon'ny angovo avo kokoa ary mila fanatanjahan-tena bebe kokoa. Ny haavon'ny fanapahana amin'ity karazany ity dia miovaova na dia ao anatin'ny fako iray ihany aza. Raha tsy ianao ilay karazan'olona afaka maneho rivotra voajanahary milamina, fa fahefana hentitra, dia aza hadino ny misafidy pup izay mora manaiky kokoa. Ny toetran'ny tsipika fampisehoana sy ny tsipika dia samy hafa be, miankina amin'ny fomba itondran'ny tompony ny alika sy ny ohatrinona ary inona karazana fanatanjahan-tena manome izy ireo. Ny English Setter dia mety ho lasa mpikorontana manahirana raha ajanona any ambadimbadika any mandritra ny fotoana maharitra ary raha tsy manome fientanam-po sy / na fitarihana ampy ny tompony. Ny alika izay mibontsina be dia be no mila lazaina amin'io fa tsy ekena ary mila fanamby ny vatany sy ny sainy. Mety ho maivana ny mpikirakira anglisy sasany droolers , na dia tsy mifantoka be loatra amin'ny alika karazana Mastiff aza.
Milanja: Lehilahy 55 - 80 kilao (25 - 36 kg) Vehivavy 45 - 70 kilao (20 - 32 kg)
Mora voan'ny dysplasia. Tandremo sao mamono be loatra an'ity karazany ity, satria mora mihombo ny lanjany. Ny vehivavy anglisy Setter dia mora voan'ny vohoka diso. Mora amin'ny fivontosan'ny sela .
Tsy atolotra ho an'ny trano honenana ary manao tsara indrindra amin'ny tokotany milanja farafaharatsiny.
Ny mpikirakira rehetra dia mila maharitra isan'andro, mandeha haingana na jogging, izay anaovan'ny alika ombelahin-tongony eo anilan'ilay olona mitazona ny firaka, na ho lasa tsy milamina sy sarotra tantanana izy ireo. Na mahatsapa izany isika olombelona na tsia, ny alika avela handeha mialoha ny olona mitazona ny fitarihana dia hino avy hatrany fa izy dia mpitarika ho an'ny olombelona, ​​toy ny ao an-tsain'ny alika, ny mpitarika no mitarika ny làlana. Ho fanampin'izany, hankafy ihany koa izy ireo ny mihazakazaka afaka amin'ny fiarovana ny tokotanin'ny fefy.
ny fiompiana alika dia manomboka amin'ny s
Ny fikolokoloana sy ny fikosehana tsy tapaka ny palitao malefaka, fisaka ary somary lavalava ihany no takiana mba hitazomana azy amin'ny toe-javatra tena tsara. Zava-dehibe ny manamarina ny burrs sy ny tangles, ary ny fitandremana bebe kokoa rehefa milatsaka ny alika. Mandrosoa na shampooing maina raha tsy ilaina. Karakarao amin'ny vodin-tongotra ny volo ary esory ny hoho. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny karazana setter voalohany dia novolavolaina tany Frantsa tamin'ny taona 1500, azo avy tamin'ny tondro Espaniola sy ny tondro frantsay. Ireo mpiorina tany am-boalohany ireo dia nantsoina hoe 'Setting Spaniels', nomena anarana araka ny fomba hiankohofany rehefa avy nahita ny vavaka izy ireo mba hamela ilay mpihaza handatsaka harato eo amboniny. Tany am-piandohan'ny taona 1800 dia nentina tany Great Britain izy ireo izay nampiroborobo ny mpiompy antsoina hoe Sir Edward Laverack ho lasa English Setter izay fantatsika ankehitriny amin'ny alika fihazana frantsay tany am-boalohany. Navoakany ny toetran'ny miondrika bebe kokoa amin'ny toerana saika hipetraka, amin'izay ny alika dia ho hitan'ny mpihaza izay manana basy ankehitriny. Ny English Setter dia matetika antsoina hoe Laverack Setter. Ny teny hoe 'setter' dia avy amin'ny fisehoan'ny alika saika hipetraka rehefa mahita lalao. Ny alikan'i Laverack no fototry ny alika fampisehoana ambony ankehitriny. ny Llewellin Setter dia nateraky ny laharana anglisy Setter avy amin'ny mpiompy anglisy iray antsoina hoe Llewellin. Ny talenta an'ny English Setter dia misy ny mihaza, manara-dia, mamerina, manondro, mpiambina ary mailaka.
Jackson's General jeneraly
Fantatry ny jeneraly Jackson Hall fa zavatra mafana izy, zahao ireo volom-borona ireo!
Jackson the English Setter amin'ny maha alika kely azy eo amin'ny roa volana eo ho eo mijery fahitalavitra
Ny voasarimakirana sy fotsy Setter dia nantsoina hoe Becky Sue, Hall tamin'ny faha-11 taonany, ovy fandriana tao an-trano, fa voronkely mahafinaritra.
'Setter mainty sy fotsy dia nantsoina hoe Hall's Belle atsimo tamin'ny faha-5 taonany - zanakavavin'i Becky Sue izy, ary kinga angovo ary zaza am-po, ary koa birddog tsara. Izy roa dia tena miasa amin'ny ekipa eo an-tsaha. Raha misy ny eo amin'ny teboka iray ary ny iray kosa mahatsikaritra, dia hitsambikina izy ary hanondro ny làlan'ny namany. '
Freckles ilay tricolor English Setter 12 taona
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny English Setter
Sary Setter anglisy 1
Alika Setter anglisy: Sarivongana Vintage azo angonina
fifangaroan'ny spaniel volamena sy akoho
sarin'alika alika an-tendrombohitra bernese
karazana alika izay manomboka amin'ny y
fifangaroan'ny aussie / border collie
alika kely mini blue shar pei amidy